The Ab Presents Nepal » यो साता तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशीफल (असार ०८ देखि १४ गते सम्म) शुभ साता
यो साता तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशीफल (असार ०८ देखि १४ गते सम्म) शुभ साता
साप्ताहिक राशिफल : २०७६ असार ०८ देखि १४ गते सम्म
२०७६ असार ०८ देखि १४ गते सम्म (सन् २०१९ जुन २३ देखि २९ सम्म)
असार ८ गते– रुद्रि पुजा (शिववास) र अग्निवास होमादी कार्य जुरेको दिन छ ।
असार ९ गते – शुभ बिवाह मुहूर्त जुरेको दिन छ ।
असार १० गते – भौमाष्टमी व्रत, गोरखकाली पुजा, शुभ विवाह मुहूतर्, रुद्रि पुजा (शिववास) र अग्निवास होमादी कार्य जुरेको दिन छ ।
असार ११ गते – भूमी पुजा, शुभ विवाह मुहूर्त र अन्तराष्ट्रिय लागु पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्धको दिवस ।
असार १२ गते – नक्वादिशी, बच्चाको अन्नप्राशन (पास्नी) मुहूर्त , नयाँ व्यापार व्यावसायको शुरुवात – दोकान खोल्न) मुहूर्त, शुभ विवाह मुहूर्त र अग्निवास होमादी कार्य जुरेको दिन छ।
असार १३ गते – स्मार्तहरुको योगिनी एकादशी व्रत र रुद्रि पुजा (शिववास) जुरेको दिन छ ।
असार १४ गते – वैष्णवहरुको योगिनी एकादशी व्रत, रुद्रि पुजा (शिववास) र अग्निवास होमादी कार्य जुरेको दिन छ ।
चन्द्रमाले यो साता मा असार ८ र ९ गते कुम्भ राशि, १० र ११ गते मिन राशि, १२, १३ र १४ गते दिउँसो २ बजेर २३ मिनेट सम्म मेष राशि र त्यसपछि वृष राशिमा प्रवेश गर्नेछन । अन्य ग्रहहरु शुक्र वृष राशिमा, मंगल, राहु र सुर्य मिथुन राशिमा, बुध कर्कट राशिमा, बृहस्पति बृश्चिक राशिमा, शनी र केतु धनु राशिमा गोचर गर्नेछन । ग्रहहरुको यो अवस्थाले प्रत्येक राशिमा के असर पर्छ भनेर विष्लेषण गरि यो साप्ताहिक राशिफल तयार गरिएको छ ।
यो साता चन्द्रमाले तपाईको एकादश, द्धादश, प्रथम र द्धितीय भावको गोचर गर्नेछन । अन्य ग्रहहरु शुक्र धन भाव र बुध चतुर्थ भावमा गोचर गर्नेछन । यो साता तपाईका ईच्छा र चाहना पुरा हुनेछन । मनमा सकारात्मक भावना हरु तरंगित हुनेछन । ईज्जत र प्रतिष्ठा बढ्नेछ । आत्मविश्वास र आत्मसम्मान उच्च रहनेछ । व्यापार व्यावसाय बाट लाभ हुनेछ । आयात निर्यात सँग सम्बन्धित कारोबार मा बढोत्तरी हुनेछ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने योग छ । नोकरी गर्नेहरुका लागि पनि शुभ समय रहनेछ । परिवार का सदस्य सँगको घनिष्ठता थप मजबुत हुनेछ । तपाईले चाहेको क्षेत्रमा लगानी गर्न जिवन साथी बाट आर्थीक सहयोग हुन सक्नेछ । विद्यार्थीको पढाईमा मध्यम अवस्था रहनेछ । आफुले सोचे जस्तो अंक हाँसील गर्न बढि परिश्रम आवश्यक देखिन्छ । प्रेम सम्बन्ध पनि यो साता मिश्रित रहनेछ । कतीपय विषयमा विवाद हुँदा भावनात्मक दुरी बढ्न सक्नेछ । सचेत रहनुहोला । तपाईका लागि यो साता मंगलबार र बुधबार तुलनात्मक रुपमा कमजोर दिनहरु रहनेछन । स्वास्थ्य कमजोर हुन सक्नेछ। परिवारका सदस्यले तपाई माथी अपशब्द प्रयोग गर्दा चिन्ता बढ्न सक्नेछ । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि भगवान श्री गणेशको पुजा आराधना गर्नु शुभ हुनेछ ।
वृष राशि (उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) –
यो साता चन्द्रमाले तपाईको दशम, एकादश, द्धादश र प्रथम भावमा गोचर गर्नेछन । शिरमा शुक्र र धन स्थानमा राहु , मंगल र सुर्यको प्रभाव रहनेछ । सो साता तपाईको कार्यक्षेत्रमा सुधार हुनेछ । पेशागत क्षेत्रमा यो साता तपाईको प्रभाव बढ्नेछ । तपाईको निर्णय क्षमताको सबैले प्रशंसा गर्नेछन । व्यापार व्यावसाय बाट प्रशस्त धन आर्जन हुनेछ । शुक्रको बलियो प्रभावले फेशन, डिजायन तथा डेकोरेशन सँग सम्बन्धित बस्तु तथा सेवाको कारोबार बाट बढि लाभ हुने देखिन्छ । औषधि सम्बन्धि कारोबार मा पनि यो साता वृद्धि हुनेछ । पारिवारिक सम्बन्ध सुखद रहनेछ तर सन्तान सम्बन्धि समस्या देखिन सक्नेछ । बालबच्चाको स्वास्थ्यमा खराबी उत्पन्न हुन सक्नेछ । बिहिबार र शुक्रबार बढि यात्राहरु हुने छन । देश विदेशका टाढा रहनु भएका व्यक्तिहरु सँग सम्पर्क स्थापित हुने देखिन्छ । खर्चको मात्रा बढ्न सक्नेछ । विद्यार्र्थीको पढाईका लागि सकारात्मक समय छ । राम्रो परिश्रम गर्नुभएमा सोचे जस्तै उपलब्धि हाँसिल हुनेछ । प्रेम सम्बन्ध पनि सफल रहनेछ । प्रेमी बाट निरन्तर साथ र सल्लाह प्राप्त हुनेछ । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि देविको पुजा आराधना गर्नू शुभ हुनेछ ।
यो साता चन्द्रमा ले तपाईको नवम, दशम, एकादश र द्धादश भावमा हुनेछ । बुधको गोचर धन स्थानमा हुनेछ । यो साता तपाईको समाजका गतिविधिमा सक्रियता देखिनेछ । समाजमा बलियो प्रभाव जमाउन सक्नुहुनेछ । अन्य मानिस हरु तपाई प्रति आकर्षित हुनेछन । व्यापार व्यावसायमा सकारात्मक समय रहनेछ । नोकरीमा सफलता मिल्नेछ । वरीष्ठ अधिकारी बाट तपाईको कार्यको उच्च मुल्यांकन हुनेछ । माता पिता सँगको सम्बन्ध थप मजबुत हुनेछ । उहाँहरुको आशिर्वाद र मार्गदर्शन तपाईका लागि अमुल्य बन्न सक्नेछ । साथी भाई एवं ईष्टमित्र सँग कतिपय विषयमा विवाद पर्न सक्नेछ । तपाईका विरुद्ध गोप्य रुपले योजना बनाउन सक्नेछन । सचेत रहनुहोला । । आध्यात्मिक कार्यबाट मन प्रशन्न रहनेछ । अध्ययन अध्यापन कार्य सफल रहनेछ । प्रेम तथा पारिवारिक जिवन सुमधुर रहनेछ । यो साता कुटुम्ब पक्षबाट समेत साथ र सहयोग प्राप्त हुन सक्नेछ । विद्यार्थीका लागि अनुकुल रहेको छ तपाईको परिश्रमको पुरा मुल्य प्राप्त हुनेछ । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि भगवान विष्णुको पुजा आराधना गर्नु उत्तम हुनेछ ।
यो साता चन्द्रमाको गोचर तपाईका लागि अष्टम, नवम, दशम र एकादश भावमा हुनेछ । मंगलको गोचर व्यय स्थान र बुधको गोचर शिरमा रहनेछ । साताको शुरुका दिन आईतबार र सोमबार अचानक समस्या आउन सक्नेछन । आर्थीक समस्या बढ्नेछ भने चिन्ता ले ग्रस्त पार्न सक्नेछ । अप्ठ्यारो परिस्थितीमा परिवार बाट भने उचित तवरले साथ र सहयोग हुनेछ । मंगलबार देखि दिनहरु शुभ रहनेछन । आत्मविश्वास बढ्नेछ । यो साता कलात्मक एवं सिर्जनात्मक कार्यमा तपाईको मन जानेछ । साताका मध्य तिरका दिनहरुमा व्यापार व्यावसाय बाट आर्थीक अवस्था सबल रहने देखिन्छ । जग्गा जमिन, गरगहना एवं सवारी साधन जोड्न सकिने योग छ । सामाजिक ईज्जत र प्रतिष्ठा बढ्नेछ । जसले मनमा जाँगर र उत्साह कायम रहनेछ । प्रेम तथा पारिवारिक जिवनमा सामान्य समस्या हरु देखिन सक्नेछन । तर ठुलो समस्या भने हुनेछैन। विद्यार्थीको पढाईमा विभिन्न कारण बस उतारचढावहरु आउन सक्नेछन । आफ्नो पढाईमा सचेत हुनु आवश्यक छ। यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि हनुमानको आराधना गर्नु उत्तम हुनेछ ।
यो साता चन्द्रमाले तपाईको सप्तम, अष्टम, नवम र दशम भावको गोचर गर्नेछन । समग्रमा सिंह राशिका लागि यो साता मिश्रित रहनेछ । साझेदारीका कार्यमा विवाद देखिन सक्नेछ । नयाँ व्यक्तित्वहरु सँग चिनजान हुनुका साथै अतिथी सत्कार मा केहि समय बित्नेछ । बच्चाको स्वास्थ्य विग्रनाले मनमा चिन्ता बढ्न सक्नेछ । विहिबार र शुक्रबार चन्द्रमाको नवम भावमा गोचर का कारण विभिन्न ठाउँमा यात्रामा जाने योग छ । बुध र सुर्यको पनि प्रभाव लाभ स्थानमा पर्ने हुनाले तपाईको कार्यक्षमता बढ्नेछ । आम्दानी बढ्नेछ । व्यापार व्यावसायमा बढोत्तरि हुनेछ । धार्मीक एवं सामाजिक कार्यबाट ईज्जत र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा सफलता मिल्नेछ । नोकरी गर्नेहरुका लागि पनि शुभ समय रहनेछ । प्रेम तथा पारिवारिक जिवन सुमधुर रहनेछ। विद्यार्थीको पढाई मन जानेछ । तपाईको परिश्रम अनुसार नै अंक प्राप्त हुने योग छ । यो साता तुलनात्मक रुपमा मंगलबार र बुधबार कमजोर दिनहरु रहेका छन। यात्रा गर्दा विशेष सजगता अपनाउनु होला । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि भगवान सुर्य लाई जल चढाउनु एवं सुर्यको पुजा आराधना गर्नु उत्तम हुनेछ।
यो साता चन्द्रमाले तपाईको षष्टम, सप्तम, अष्टम र नवम भावमा गोचर गर्नेछन । छैठौ भावमा क्षिण चन्द्रमाको गोचर का कारण कार्यक्षेत्रमा समस्या देखिन सक्नेछ । घरपरिवार का कारण तनाव बढ्न सक्नेछ । स्वास्थ्य अवस्थामा समेत गिरावट आउन सक्नेछ । रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर रहनेछ। आफ्नो आहार विहार मा ध्यान दिनु उत्तम हुनेछ । आर्थिक लेनदेनका विषयमा विवाद पर्न सक्नेछ । समग्रमा आर्थीक अवस्था मिश्रित रहनेछ । व्यापार व्यवासाय मा उतारचढावहरु देखिन सक्नेछन । शनिबार को दिन भने शुभ रहेको छ । अवस्थामा सुधार हुनेछ । कुनै नयाँ ठाउँको भ्रमण गर्न अवसर जुट्नेछ । आफ्नो जिवन साथीको साथ र सहयोग ले आत्मविश्वास भने कायम नै रहनेछ । परिवारमा मेलमिलाप र एकता कायम हुनेछ । नयाँ व्यक्ति सँग प्रेम सम्बन्ध स्थापित हुन सक्नेछ । विद्यार्थीको पढाईमा प्रगती हुनेछ । गुरुहरु बाट तपाईलाई महत्वपुर्ण मार्गदर्शन हुनेछ । तुलनात्मक रुपमा विहिबार र शुक्रबार तपाईका लागि कमजोर दिनहरु रहेका छन । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि भगवान विष्णुको पुजा आराधना गर्नु शुभ हुनेछ ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते )
तुला राशिका लागि यो साता चन्द्रमाले तपाईको पञ्चम, षष्टम, अष्टम र नवम भावमा गोचर गर्नेछन । यो साता तपाईको बौद्धिक विकासका लागि अवसर जुट्ने देखिन्छ । तपाईको निर्णय गर्न सक्ने क्षमता पनि अब्बल रहनेछ । घरपरिवार मा रमाईलो वातावरण कायम हुनेछ । कार्य स्थलमा पनि सकारात्मक समय रहनेछ । शत्रुहरु पराजित हुनेछन । साझेदारीका कार्यबाट उचित मुनाफा आर्जन हुनेछ । आर्थीक अवस्था सबल रहनेछ। साथीभाईको साथ र सहयोग ले अप्ठ्यारा काम समेत बन्नेछन । यो साता व्यापार व्यावसायमा सकारात्मक अवस्था रहनेछ । साताको अन्त्य तिरका दिनमा चन्द्रमाको गोचर अष्टम भावमा हुने हुनाले स्वास्थ्य बिग्रने एवं अनावश्यक कार्यमा धन खर्च हुन सक्नेछ । तर अन्य दिनहरु भने शुभ रहेका छन । धार्मीक एवं सामाजिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । नोकरी गर्ने हरुका लागि कार्य स्थलमा कामको बोझ थपिन सक्नेछ । प्रेम सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ । बिद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो साता शुभ रहेको छ । अध्ययनमा मन लाग्ने र पढेको कुरा याद हुने समय रहनेछ । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि देवीको पुजा आराधना गर्नु उत्तम हुनेछ ।
यो साता चन्द्रमाको गोचर तपाईका लागि चतुर्थ, पञ्चम, षष्टम र सप्तम भावमा हुनेछ । वृश्चिक राशिका लागि यो साता सबल रहेको छ । घरपरिवारमा तपाईका बारेमा चर्चा परिचर्चा हुनेछ । यदि तपाई अविवाहित हुनुहुन्छ भने आफ्ना आफन्त बाट विवाह का लागि प्रस्तावहरु आउन सक्नेछन । माता पिता सँग महत्वपूर्ण विषयमा छलफल र सल्लाह हुनेछ । अरुका अगाडी आफ्नो सिर्जनात्मक एवं कलात्मक क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर जुट्नेछ । कला, संगित,चलचित्र तथा अभिनय संग सम्बन्धित कार्य गर्नेहरुका लागि नाम र दाम कमाउने अवसर हुनेछ । यो साता तपाँईका विरोधिहरु पराजित हुनेछन । रोग प्रतिरोध क्षमता पनि सबल रहनेछ । आर्थीक अवस्था सकारात्मक रहनेछ । व्यापार व्यापसाय बाट पनि उचित लाभ मिल्नेछ । नोकरी गर्ने हरुका लागि पनि शुभ समय रहने देखिन्छ । सन्तान बाट सुख हुनेछ । बिद्यार्थीको पढाईका लागि उत्तम साता रहेको छ । प्रेम तथा पारिवारिक जिवन पनि सुखद रहनेछ । आफ्नो प्रेमी सँग कुनै नयाँ ठाउँमा गई रमाईला पलहरु बिताउन सक्नुहुनेछ । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि भगवान श्री गणेशको पुजा आराधना गर्नु उत्तम हुनेछ ।
धनु राशिका लागि यो साता चन्द्रमाको गोचर तृतीय, चतुर्थ पञ्चम र षष्टम भावमा हुनेछ । साथीभाई सँगको घनिष्टता बढ्नेछ । दाजु भाई बाट पनि आवश्यक परेको बेलामा सहयोग प्राप्त हुनेछ । यो साता छोटा र रमाईला यात्राहरु हुने योग छ । मंगलबार र बुधबार चतुर्थ चन्द्रका कारण पारिवारिक समस्याका कारण चिन्ता बढ्न सक्नेछ । माता पिताको स्वास्थ्यमा समेत कमजोरी देखिन सक्नेछ । तर बिहिबार देखि भने अवस्थामा महत्वपूर्ण सुधार हुनेछ । सन्तान बाट सुख प्राप्त हुनेछ । प्रशस्त धन आर्जन हुने एवं बचत पनि हुने योग छ । मिष्ठान्न भोजन प्राप्त हुनेछ । नोकरीमा सफलता मिल्नेछ । नोकरी मा स्थान परिवर्तन हुने एवं जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्नेछ । सहकर्मी साथी बाट साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । समाजका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु सँग परिचित हुने अवसर जुट्नेछ ब्यापार व्यावसाय बाट उचित लाभ मिल्नेछ । जिवनसाथी सँग पनि भावनात्मक दुरी बढ्न सक्ने देखिन्छ । सुमधुर सम्बन्धका लागि जिम्मेबार हुनु आवश्यक देखिन्छ । यो साता प्रेम सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ । एक आपसमा विश्वास बढ्नेछ भने आपसी समझदारी कायम रहनेछ । अध्ययन कार्यमा मन जानेछ । यो साता नयाँ सोचका साथ अध्ययन मा लाग्नु उत्तम हुनेछ । प्रतिस्पर्धिलाई चुनौती दिन सक्नुहुनेछ । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि भगवान शिवको पुजा आराधना गर्नु उत्तम हुनेछ ।
यो साता चन्द्रमा ले तपाईको द्धितीय, तृतीय, चतुर्थ र पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछन । समग्रमा तपाईका लागि यो साता सबल रहनेछ । धन लाभ हुनेछ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर जुट्नेछ । कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न तपाई सक्षम हुनुहुनेछ । आत्मविश्वास र आत्म सम्मान उच्च रहनेछ । नोकरी गर्नेहरुका लागि यो साता केहि कमजोर रहनेछ । सहकर्मी साथी बाट तपाईका विरुद्ध उजुरी गर्ने वा हाकीम लाई कुरा लगाउन सक्ने अवस्था आउनेछ । सजग रहनुहोला । विहिबार र शुक्रबार आमाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्नेछ । तर पारिवारिक सम्बन्ध भने थप प्रगाढ हुनेछ । व्यापार व्यावसाय मा विस्तार हुनेछ । बिरोधीहरु पराजित हुनेछन । आम्दानीका क्षेत्रहरु बढ्दै जानेछन । प्रेम सम्बन्ध सुखद रहनेछ । आफ्नो प्रेमीको हरेक सुख दुखमा साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । बिद्यार्थीको पढाईमा विभिन्न बाधा एवं समस्याहरु देखिन सक्नेछन । चुनौतिहरु लाई पार लगाउँदै पढाईमा मन लगाउनु जरुरी छ । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि हनुमान चालीसाको पाठ गर्नु शुभ हुनेछ ।
कुम्भ राशिका लागि यो साता चन्द्रमाले प्रथम, द्धितीय, तृतीय र चतुर्थ, भावमा गोचर गर्नेछन । समग्रमा तपाईको यो साता सफल रहनेछ । मानसीक अवस्था सुदृढ रहनेछ । जिम्मेवारी बोधका साथ कुनै पनि कार्यलाई कुशलता पुर्वक सम्पन्न गर्नु हुनेछ । तपाई सँग मनमुटाव भएका व्यक्तिहरु समेत यो साता नजिक हुन चाहनेछन । सिर्जनात्मक एवं अभिव्यक्ति क्षमता बढनाले मन हर्षित हुनेछ । आफ्ना भाई बहिनी सँगको सम्बन्ध प्रगाढ हुनेछ । उनिहरुबाट अप्ठ्यारो परिस्थितीमा साथ र सहयोग समेत प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यावसाय बाट उचित लाभ हुनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा समेत तपाईको यो साता योगदान पुग्ने देखिन्छ । सन्तान बाट सुख र सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ । तपाईका बिरोधि हरुको मनोबल कमजोर हने देखिन्छ । विद्यार्थीको पढाईमा मन जानेछ । परिवारमा मेलमिलाप र शान्ति कायम हुनेछ । प्रेम सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ । आफ्नो सुखदुखमा प्रेमीको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । शनिबार भने तुलनात्मक रुपमा कमजोर दिन देखिएको छ । शनिबार कुनैपनि महत्वपुर्ण कार्यको शुरुवात नगर्नु उत्तम हुनेछ । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि भगवान श्री गणेशको पुजा आराधना गर्नु उत्तम हुनेछ।
यो साता चन्द्रमाले तपाईको द्धादश, प्रथम, द्धितीय, र तृतीय भावमा गोचर गर्नेछन । साताको शुरुमा आईतबार र सोमबार स्वास्थ्य बिग्रने एवं चिन्ता बढ्ने योग छ । पारिवारिक समस्या का कारण अनावश्यक यात्रा हुने एवं खर्च बढ्न सक्नेछ । मनलाई शान्त पार्न आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यमा लाग्नु शुभ हुनेछ । कुनैपनि निर्णय गर्नू अघि राम्रो सोच विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ अन्यथा पछि गएर पछुताउनु पर्ने हुन सक्छ । बिहिबार र शुक्रबार धन स्थानमा चन्द्रमाको प्रभाव रहने हुनाले प्रशस्त धन आर्जन हुनेछ । आर्थीक अवस्था सबल रहनेछ । व्यापार व्यावसाय बाट उचित मुनामा आर्जन हुनेछ । पारिवारिक जिवन मिश्रित रहनेछ । समस्या समाधानका लागि दाजु भाई दिदी बहिनी का साथै कुटुम्ब पक्षबाट समेत साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । नोकरी गर्नेहरुका लागि नयाँ कामको अनुभव गर्न पाईने अवसर हुनेछ। बिद्यार्थीको पढाईमा प्रतिकुल समय देखिन्छ । विभिन्न कारणबस पढाई विग्रन सक्नेछ । सचेत रहनुहोला । प्रेम सम्बन्धमा सामान्य मनमुटावहरु देखिन सक्नेछन । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि हरेक दिन भगवान बिष्णुको पुजा आराधना गर्नु शुभ हुनेछ।